ဒိုက်ဦးမြို့နယ်တွင် နှစ် ၄၀ ကျော် ချုပ်နှောင် ခိုင်းစားခံရသူ အမျိုးသမီး ပြန်လွတ်ပြီ Domestic | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဒိုက်ဦးမြို့နယ်တွင် နှစ် ၄၀ ကျော် ချုပ်နှောင် ခိုင်းစားခံရသူ အမျိုးသမီး ပြန်လွတ်ပြီ Domestic
ဒိုက်ဦးမြို့နယ်တွင် နှစ် ၄၀ ကျော် ချုပ်နှောင် ခိုင်းစားခံရသူ အမျိုးသမီး ပြန်လွတ်ပြီ Domestic
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 28, 2011 in Community & Society, Cultures, Legal Information/Visa, Myanma News, News | 13 comments
သာမန်အားဖြင့်တော့ အခုလို သတင်းတပုဒ်လုံးကို ကျနော်ကူးယူဖော်ပြလေ့ မရှိပါဘူး။ မူရင်းတင်ပြသူရဲ့ ကြိုးစားမှုကို လေးစားသောအားဖြင့်ပါ။ ပြီးတော့ ခွင့်လည်းမတောင်းနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုသတင်းကတော့ မြန်မာပြည်၊ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုသည် သူတကာထက် သာလွန်တယ်မြတ်တယ် ဆိုသူများ သတိချပ်ဖို့ပါ။ သိထားဖို့က လူတိုင်းဟာ အခြေခံအတူတူပဲမိုလို့ ငါတို့ဗီဇက သူများထက် ပိုသာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မထားကြဖို့ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ ပွင်လင်းလွတ်လပ်မှု စတာတွေက တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု သာလွန်ထူးမြတ်မှုကို ပေးသွားတာပါ။
မိုးမခမီဒီယာမှ တဆင့်ကူးယူပါသည်။ မူရင်းဇစ်မြစ်ကတော့ ဒီဗွီဘီကပါ။
“ဟုတ်ကဲ့ — သူတို့က ဒီလိုပဲ ကျနော်တို့ စခန်းမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားတာ ကျနော်တို့ ဆီမှာက။ စခန်းမှူးလည်း ဒီဥစ္စာပဲ တွေ့ပေးလိုက်တာ ဒီဥစ္စာက သူတို့ဆီမှာ”
မူရင်း – DVB အသံလွှင့်ဌာန www.dvb.no
စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဗျာ..။ ကြားရတာ မသက်သာ လိုက်တာ။
ညှင်းပမ်း နှိပ်စက် ခံရသူ အနေနဲ့ မျှတတဲ့ တရားစီရင်မှုမျိုး မရနိုင်တာ ဝမ်းနည်း စရာ အကောင်းဆုံး ပဲ။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လူ့တရိစ္ဆာန်တွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပွားများ လာနေပြီလား မသိ။
ကျောင်းဆရာမ မဟုတ်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ရက်စက်မလဲမသိဘူး…
လုပ်နေတော့ ကျောင်းဆရာမ သူများတွေ့ရဲ့အပူဇော်ခံထိုက်သူတွေ
အဲဒီသတင်းနောက်ဆက်တွဲလေးလဲ ထပ်တင်ပေးပါဦးနော် ကိုကြောင်ကြီး
ကြားရတာ တော်တော်စိတ်ထဲမချိသလို ဒေါသလည်းထွက်မိပါတယ်။
ဒီဟာကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးမယူရင် နောင်မှာ ဒီလိုမျိုးတွေဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီကျောင်းဆရာမဆိုတာတွေကို ထောင်ထဲ နှစ်ရှည်ပြန်ထည့်လိုက်ပါ။
သူတို့ စီးပွားဥစ္စာတွေကို အဓမ္မစေခိုင်းမှုအတွက်လျော်ကြေးအနေနဲ့ ဒေါ်တင်တင်အေးကို ပေးရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ နားလည်သင့်တာက အကျင့်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားပါ
ဆိုခြင်တာက ဆဲရေးတိုင်းထွာတတ်တဲ့သူနဲ့ 
ခုဘဲကြည့် အပြင်ပန်းမှာ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်နဲ့ ဟန်ဆောင်နေပေမယ့်
ဒါက အခြေနေတစ်ခုပေါ်မှာ သာမန်ဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါ
ဘယ်လို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သင့်သလဲဆိုတာက အရေးကြီးဆုံးလို့ ဘဲဆိုခြင်ပါတယ်
ဟာ ရုပ်မာလိုက်တာ ရိုင်းဆိုင်းလိုက်တာဆိုပြီး ပြောနေယုံနဲ့ ပြီးမလား
လူ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေအရ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်ပါတာ်
ဘာအာဃာတ တရားနဲ့ မှ မဟုတ်ဘူးနော်
လုပ်သင့်တာကို လုပ်မှ လုပ်ထားမှ
တစ်ခါတစ်ရံ သင်ညာရှိများ ရဲ. စိတ်ရိုင်းက ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်နော် ။
ွှအဲ့ဒါဆို ကျနော်ကကူးယူပီး ပဲခူးမြို့ နယ်အပါအဝင် ကျန်အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကို မျှဝေလိုက်ပါအုံးမယ်ဗျာ…………….
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ။ လူတစ်ယောက်ကို ဒီလောက်လုပ်ထားတာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူ သင့်တယ် ။
ရဲကလည်း လည်လည်ဝယ်ဝယ် ဤ သို့ဖြေသွားပါသည် ။
ဘယ်ဥစ္စာမှန်းကို မသိဘူး ။
nyinekhine79@gmail.com က ကိုကြောင်ကြီး ရေးထားတဲ့ သာမန်ကနေစပြီး အစဆုံးလိုက်ကူးပြီး ဖြန့်နေပါတယ် ဗျို့ … ။
အင်း…မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ၊မြန်မာပြည်ကြီးကိုချစ်တယ်၊မချစ်ဘူးဆိုတာတွေရဲ့ အဖြေဟာ အဲဒီမှာပဲ။အဓိကက လူတွေရဲ့စိတ်တွေ၊သဘောထားတွေပဲ။ဒါတွေမပြောင်းသေးပဲနဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။
အခုဒီနေရာမှာ ညီအကိုမောင်နှမတွေ မန်းထားလေးတွေကိုကြည့်ရင် မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ်လေးတွေ ပေါ်လွင်နေတာတွေရတယ်။ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်ကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။
ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုတော့ ဘယ်သူမှ ရိုက်ချိုး ဖျက်စီးပြစ်လို့မရပါဘူး။
နောက်တစ်ခု အကူအညီပေးနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးပေးဖို့အကြံပြုပါတယ်။
အသုံးမကျတဲ့ ဂတုံးမ ဟုတ်ပါဘူး မှားသွားလို့ 
ချာတူးလန်ပြောတာကို ဆန်ပို့ ပါတယ်
အသိပေးစာရွက်စာတမ်းတွေကို ဖြန့် ဝေရမှာပါ
ဒီလိုအကြောင်းမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင် တိုးတိုးပြောတတ်ကြတာ သဘာဝပါ
အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ သူတို့ လက်ထဲကို
ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်သူလဲ ဘယ်ကလာတဲ့စာရွက်လဲ
ဒါကြောင့် စာရွက်ဝေငှခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက်
ခေါင်းသွားထောင်လို့ လဲမရဘူးလေ ဟိုက ထုမှာ
စာရွက်ဝေငှတဲ့လူကလဲ လုံးဝ လုံးဝ ခေါင်းထောင်လို့ မရဘူး
ကျွန်တော်တို့ လဲ ကျွန်တော်တို့ နေတဲ့ဒေသမှာဒီလိုဘဲလုပ်ပါတယ်
အကြောင်းရာ တစ်ခုမှာ အလိုလိုချိတ်ဆက်မိလာပါတယ်
အခုလိုပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အဘပုရေ……….
ကျနော်က သိပ်မသိဘူးဗျ ဒီလိုမတရားတာတွေ ထူးဆန်းတာတွေဆို ပြန်ဝေခဲ့တာပဲ နောက်ဆိုဒီ့ထက်အကျိုးရှိတာကိုလုပ်ပါ့မယ်ဗျာ………
ကျုပ်မှာ နှလုံးအားနည်းရောဂါရှိနေလို့ ဒီလိုရက်စက်လွန်းတာတွေ ကြားရရင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့
ရက်ပေါင်းများစွာ ၀မ်းနည်းနေရတော့မှာ….အဲဒီယုတ်မာတဲ့သူ တွေကို အနေနီးခဲ့ရင် တခုခုတော့
လုပ်ကြစမ်းပါ….မိုက်ကယ်ပြောသလိုပါ…ဒေသတွင်းမှာဆိုရင် ကျုပ်က လက်မနှေးတတ်ဘူး..